बुधबार, ७ आषाढ, २०७४ मा प्रकाशित,
मालिक र मालिकहरूलाई कामले खुसी पारेर आफ्नो सामान्य ज्याला निखन्छ । सन्तानका लागि बाँचेको त हुन्छ तर सन्तानलाई खान र लाउन पर्याप्त सुविधाहरू दिन सक्दैन । उसले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्रमा आफ्ना गुनासाहरू सुनाउने कुनै स्थान पाउँदैन । भन्न त अहिले जनता सार्वभौम सम्पन्न भएका छन् भनिएको छ । त्यो प्रातिशतिक हिसाबले पनि अलि सुविधा सम्पन्न स्थानका र टाठा बाठाहरूका लागिमात्र हो ।
निरिह र गरिब जनता जहाँजहाँ आफ्ना गुनासाहरू सुनाउन जान्छ, त्यहाँ समाधानका बदलामा उसलाई आश्वासन र सपनाका भारीहरू बोकाएर फर्काइन्छ । यो हेर्न नेपालका तमाम गाउँ र बस्तीमा गए स्पष्ट हुन सकिन्छ । जहाँ बास्तविक जनताको बसोबास छ । विकटापन्न स्थितिमा जनजीविकाका साधन पनि नपाएर जनता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको प्रत्याभूति नपाएर छट्पटाएको छ । समाचारका भाषामा खोजौं । मालिकले भनेका स्थानमा भोट हाल्ने नेपाली अझै नेपालमै रहेछन् ।
त्यस्तै जनतालाई यहाँ हुने हरेक चुनावमा नेता, कार्यकर्ता र नेताका एजेन्ट (?) हरूले जनार्दन भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । भोटका खातिर खातिरदारी पनि गर्दछन् । जब भोट ऐनकेन प्रकारेण उछिट्याउँछन् अनि पाँच वर्ष तिनीहरूको मुखै देख्न पाउँदैन– बास्तविक जनताले । यो नेपालको मात्र नभएर गरिब एवम् अल्पविकसित देशको आम र प्रतिनिधि समस्या हो । अझ नेपालमा बढी हावी भएको पाइन्छ ।
अहिले जनताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्– ‘संभवतः दसौं हज्जार सहिद भएको देश नेपाल विश्वमा पहिलो हो । जहाँ सहिदकै सपनामाथि निरन्तर व्यभिचार भएका छन् । यहाँ ज्ञात भन्दा अज्ञात सहिदहरू धेरै छन् । यतिधेरै सहिद भएर पनि नेपालले राजनीतिको सही मार्ग पक्रन सकेको छैन । यो नेपाली लोकतन्त्र कै लागि विडम्बना हो ।’
जनताको भावनालाई कदर गरेर मात्र लोकतन्त्र फष्टाउन, फुल्न र फल्न सक्छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म बास्तविक लोकतन्त्र नभएर नेतातन्त्र मात्र फष्टाएको छ । नेतातन्त्र हावी भएका मुलुकमा कानुन र नियमहरू नेताका मुठ्ठीका माखा बन्छन् । संक्रमण कालको दुहाई दिएर त्यो निरन्तर भएको छ । एकादुई मात्र नभएर सयौं त्यस्ता घटनाहरू नेपालमा घटेका छन् जहाँ जनताका नाममा लाखौं जनताले दुःसाध्य दुःख पाएका छन् । भोगेका छन् ।
केही समयअघि राजधानीको ट्राफिक पुलिसले जेब्रा क्रसबाट बाटो नकाट्ने बटुवाहरूलाई दुई सय जनही जरिवानाको नियम बनाएको थियो । त्यो भन्दा अघि राजधानी मै चल्ने सबै प्रकारका गाडीहरूलाई प्रेसर हर्न निषेध गरिएको थियो । हर्न निषेधको नियम अझै बर्करार छ तर बटुवालाई जरिवाना गर्ने नियम सरकारले फिर्ता लिइसक्यो । मेलाम्चीले राजधानीका बाटाहरू अस्तव्यस्त छन् । जथाभावी बाटाहरू कोपरिएको, चिथरिएको र भत्काइएको छ । त्यसले धूलो र हिलोको समस्या ल्याएको छ । केटाकेटी, वृद्धवृद्धाहरू बेरामी परेका छन् । युवाहरूलाई पनि हिँड्न र सवारी चलाउन समस्या परेको छ । यस्तो बेलामा कताको जेब्राक्रस कताको बाटाका नियम । मनलाग्दी र सनकी पारामा ल्याइएको त्यो नियमले अनाहकमा बटुवाहरूलाई दुःख दियो भनेर अनेक तवरले विरोधका स्वरहरू उरालिए । फलतः सरकार एक कदम पछि हट्यो ।
पूर्वाधार विना कुनै पनि निर्णय लिनु भनेको सनकको शासन हो । अहिले स्थानीय निर्वाचनमा पनि सरकारले सनकको निर्णय लिएको छ । १, २, ५ र ७ मा चुनाव हुनै लागेको थियो । २ नम्बरमा हठात रोकिदिएको छ । त्यहाँ चुनाव हुन्छ भनेर सामान्य जनताहरू ढुक्क थिए । खेतीपाती र मध्य बर्खामा हुने चुनावमा पनि तिनीहरूमा एक प्रकारको खुसीको माहौल देखिएको थियो । राजपासँगको वार्ता पनि चल्दै गर्दा एक्कासी सरकारले अप्रिय निर्णय लियो कि जसका कारण २ नं का जनताहरूमा निराशा छाएको छ ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि चुनाव हुनु पर्दथ्यो । नेताहरूले चुनाव नगर्ने बहाना खोज्नु भनेको या त जनमतबाट भाग्न खोज्नु हो । या त जनमतको सम्मान नगर्नु हो । चुनाव नै लोकतन्त्रको गहना हो । जो, जसले र जति मत ल्याएर जिते पनि ती जनताका प्रतिनिधि हुन् । तिनले जनताका कामहरूलाई सजिलोसँग गर्ने थिए । गाउँमा सिँहदरबार पु¥याउने स्याल हुँइयाँ पनि अब २ नं. मा रोकिएको छ । आउने दसैँका मुखमा गएर चुनाव राखिएको छ । त्यो पनि फेरि नसर्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अर्कातर्फ सरकारले जहाँ चुनाव हुँदैन, त्यहाँ नयाँ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने भनेको छ । यो दोहोरो स्टेण्डरबाट आखिरमा चेपुवामा पर्ने भनेकै जनता नै हुन् । जतातिरबाट पनि जनतालाई चेपुवामा पार्ने काम अब आइन्दा नहोस् ।
बाटो काट्नेलाई २ सय जरिबाना, हर्न बजाउनेलाई १ हजार जरिवाना तर मान्छे काट्नेलाई एक करोड ७४ लाख रुपैयाँले पुरस्कृत गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले चुनावको मुखमा आएर फेरि जनता भड्काउन खोजेको छ । दोहोरो स्टेण्डरका माहिर खेलाडी प्रचण्डले शेरबहादुरको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएका छन् । आफूले सर्तानुसार इमान्दारी देखाएको प्रचारप्रसार गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रचण्ड अहिले सफलताको जश जति आफूले लिएर असफलताको भूमरीमा देउवालाई जाक्न उद्यत्त छन् । समयक्रममा यस्तै अलोकप्रिय निर्णयहरू लिँइदै जाने हो भने नेपाली काँग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
काँग्रेसले आफ्ना कार्यकालमा गरेको राम्रा र दीगो निर्णयलाई पनि चुनावका मुखमा जनताका माझमा लगेर क्यास गर्न सकेको छैन । ऊ आत्मरतिमा मग्नमस्त बनेको छ । प्रतिपक्ष भने न्वारानदेखिको बल लगाएर आफ्नो शाख जनतामा बढाउन लागि परेको छ । यस्ता स्थितिमा सरकारले गर्ने ससाना पनि अलोकप्रिय निर्णयले काँग्रेसको भोट गुम्दै छ ।
चुनाव भएका स्थानमा पनि अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू गाडी, आवास र भत्ताका लागि लबिङ् गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले निश्चित तलबभत्ताको व्यवस्था गरेको हौवा जो पिटाइएको थियो त्यो पनि अहिले स्थानीय निकायबाटै र आफ्नै स्रोतबाट मात्रै खान पाउने नियम बनाएर सरकारले चेपुवामा पार्न खोजेको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिमा जनताका काम प्रतिको भावनामा निराशा उत्पन्न भयो भने त्यो पनि जनताका लागि प्रत्युत्पादक नै बन्न जान्छ । जताबाट पनि जनतालाई नै सास्ती हुने भए पछि आखिर जनतामा निराशाका काला बादलहरू नमडारिएलान् भन्न सकिन्नँ । बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याएर अहिले वृद्धभत्ताका अनर्गल हल्लाहरूले बजार पिटेको अवस्था छ । के, कति, कुन माध्यमबाट बढाइएको हो ? त्यो पनि जनतालाई जानकारी दिइएको छैन । सूचनाको अधिकार पाउने जनताले त थाहा पाउलान् तर जसलाई सूचनाको अधिकारका बारेमा पनि किञ्चित थाहा छैन । ती बरा कुहिराका काग भएका छन् ।
एकजना नेपाली काँग्रेसका नेताले आफ्नो लेखमा भनेका छन्– ‘यो पुस्ताबाट देशको विकास हुनै सक्दैन । देशलाई अघि बढाउन अब नयाँ पुस्ता सबैतिरबाट आउनै पर्छ ।’ यो भनाइले पनि निराशाको संचरण गरेको छ । नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने माध्यम भनकै चुनाव हो । अहिले चुनावमा त्यो केही मात्रामा पूरा भएको छ । अब युवा मतदाताले पनि आफूजस्तै नयाँ, नौजवान, ऊर्जाशील र सकारात्मक सोच र धारणा भएका नेतालाई चुन्नु पर्‍यो । समग्रमा विकासका गति र प्रगतिलाई रोक्नु भएन । विकासले नै नेपाल अघि जान्छ । भाषण र संभाषण कुनै नेपालीलाई पनि प्रिय र प्रतिकर लाग्दैन । अहिलेलाई युवा मतदाता र युवा नेतृत्वले यो कुरा बुझे हुन्छ । अरु पछि आफैँ पानीले आफ्नो लेबल आफैँ मिलाएझैँ क्रमशः मिल्दै जान्छ ।